ADY AMIN’NY « CORONAVIRUS » : Miitatra 15 andro ny fihibohana an-trano
Nandray fanapahan-kevitra vaovao indray ny fitondram-panjakana amin’ny ady hatao fifehezana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus. 6 avril 2020
Nambaran’ny Filoha Rajoelina, omaly alina, fa tsy maintsy tohizana ao anatin’ny 15 andro indray ny fihibohan’ny olona ao n-trano. Mihatra tahaka izany ihany koa ireo fepetra rehetra efa noraisina teo aloha.
“Mbola ao anatin’ny ady tanteraka isika izao amin’ny handresena an’ity fahavalo tsy hita maso ity. Mbola tsy afaka misioka satria mbola tsy tafavoaka ny ala”. Io raha fehezina ny hafatra noentin’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoaka Malagasy, omaly alina. Fotoana izay efa nampanantenainy fa tsy maintsy hanaovany tombana tao anatin’ izay 15 andro voalohany niatrehan’i Madagasikara ny valanaretina “Coronavirus” izay.
Hatreto raha ny antontan’isa ofisialy dia miisa 72 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” eto Madagasikara. Lehilahy ny ankamaroan’izy ireo ary tranga avy tany ivelany ivelany avokoa. Raha ny vaovao ofisialy nivoaka omaly ihany dia fantatra fa efa nisy olona roa tamin’ireo narary no sitrana soa aman-tsara ary efa nalefa nody any amin’ny fianakaviany. Tsy mbola nisy namoy ny ainy teto Madagasikara hatreto, ary anisany vaindohan-draharaha apetraky ny fanjakana ny tsy hisian’izany.
Betsaka ireo fepetra nampiharina tao anatin’izay, izay azo lazaina fa nahitana an’ireo vokatra tsara ireo, raha ny tatitra nambaran’ny Filoha. Hatreto, hoy izy, dia azo lazaina fa voafehin’i Madagasikara ity areti-mandoza ity, saingy kosa mila malina hatrany amin’ny tsy hiparitahan’ izany manerana ny Nosy isika, indrindra eo anatrehan’ny fisian’ireo olona nahazo ny tsimok’ aretina tamin’ny fifampikasohana. Tao anatin’iny 15 andro voalohany iny dia niompana betsaka tamin’ ny fijerena sy fikarohana an’ireo olona ahiahiana ho mitondra ny tsimok’aretina ny ezaka nataon’ny fanjakana niaraka tamin’ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana. Tafiditra tao anatin’izany ny fanaovana fitiliana an’ireo olona rehetra tonga avy any ivelany nanomboka tamin’ny datin’ny 11 marsa lasa teo, ary nialohavan’ny fanokana-monina azy ireo nandritra ny 14 andro. Nisy tamin’izy ireo no voamarina fa tsy mitondra ny tsimok’ aretina izay avy hatrany dia nalefa nody ary nisy kosa ireo hita fa nitondra ny tsimok’aretina ary tsy maintsy noraisin’ny fanjakana an-tanana. Tao anatin’io fe-potoana io ihany koa no nahalalana fa efa nanomboka nihanaka teny anivon’ ny fiaraha-monina ny “coronavirus”.
Raha ny teto an-drenivohitra manokana dia faritra vitsivitsy no voalaza fa nahitana olona nitondra ny tsimok’aretina kanefa nifamezivezy teny anivon’ny tsena. Vokatr’izany, dia nisy ireo tratra avy tamin’ny alalan’ny fifampikasohana. Nisy tranga tahaka izany ihany koa tany Toamasina sy Fianarantsoa. Hatreto mitotaly 21 ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” noho ny fifampikasohana na tamina teratany vahiny na tamina Malagasy izay efa nifanerasera tamina teratany vahiny. Ny ankamaroan’izy ireo dia saika eto Antananarivo avokoa.
Manan-kery avokoa ireo fepetra rehetra teo aloha
Manoloana izany indrindra, nilaza ny Filoha fa rehefa nihaona tamin’ireo filohana andrim-panjakana telo tonta, sy ireo tompon’ andraikitra ambony eo anivon’ny fahasalamana ary ireo lehiben’ny fiangonana ny tenany dia nandray ny fanapahan-kevitra ny amin’ny fanohizana ao anatin’ny 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana. Tohizana ao anatin’ny 15 andro manaraka ihany koa tsy fahafahana mivoaka trano. Mbola mijanona tsy miasa avokoa ireo mpiasam-panjakana sy mpianatra rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ary ny anivon’ny anjerimantolo. Mbola manan-kery ny fampiharana an’ireo fepetra rehetra teo aloha toy ny tsy fahafahana mivoaka amin’ny alina manomboka amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 5 ora hariva. Ny fiara fitateram-bahoaka, sy ny taksy dia voarara avokoa mandritra an’io fe-potoana io. Tsy misy mahazo misokatra ny toerana rehetra fanaovana lanonana, foanana ny famoriam-bahoaka amin’ny endriny rehetra. Ireo Faritra telo tena ahitana ny valanaretina “coronavirus” no iharan’ireo fepetra ireo.
Anisan’izany ny ato anatin’ny Faritra Analamanga, Atsinanana ary ny Faritra Matsiatra Ambony. Nametraka vahaolana kosa ny fitondrana manoloana an’ireo olona avy any amin’ny faritra taraiky eto an-drenivohitra. Nomena fe-potoana mandritra ny roa andro izy ireo ahafahany mody any amin’ny toerana niaviany. Tsy maintsy arahina kosa anefa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, toy ny fanasana tanana mialoha ny hiditra fiara, tsy maintsy mitondra tampim-bava sy ny maro hafa. Misokatra ihany koa ny zotram-piaramanidina ato anatiny saingy mampitohy an’ireo toerana tsy misy trangana aretina vokatry ny fifampikasohana. Ireo mpandeha rehetra amin’izany dia tsy maintsy hatao fitiliana avokoa. “Sarobidy amiko loatra ny ain’ny Malagasy”, hoy ny Filoha. Nambarany fa tena sarotra ny iainan’ny ankamaroan’ny tokantrano Malagasy an’ireo fepetra noraisina ireo, saingy tsy maintsy natao izany satria izay no hany vahaolana tokanaa ahafahana mifehy ny fiparitahan’ity valan’aretina ity ao anatin’ny fotoana fohy. Ankoatra ny lafiny ara-pahasalamana dia voakasika ao anatin’io ihany koa ihany koa ny fiahiana an’ireo tokantrano tena marefo.
Hapetraka isaky ny Fokontany ny rafitra “Loharano”
Manomboka anio dia miditra amin’ny tapa-bolana faharoa hanohizana an’ireo ezaka efa natao indray ny fitondram-panjakana Malagasy. Amin’ity 15 andro manaraka ity dia misy ny paikady vaovao napetraky ny fitondrana tafiditra hatrany amin’ny fepetra hoentina hamongorana hatramin’ny fakany ny fihanak’ity valanaretina ity eto amintsika. Hoentina ihany koa hanampiana sy hanosehana ny tokantrano marefo mandritra ny fe-potoana hiatrehana ny fihibohana io. Nambaran’ny Filoha fa hisy ny rafitra isam-pokontany antsoina hoe “Loharano”. Rafitra izay natao tena akaiky ny vahoaka ka isaky ny Fokontany no hametrahana azy. Ity farany no handrindra, handamina , hanara-maso ary hitantanana an’ireo fanampiana omen’ny fanjakana omen’ny fanjakana ho an’ireo ankohonana tena marefo. Notsiandrian’ny Filoha fa olona azo antoka, madio tanana tsy tia kolikoly ary manana fitiavan-tanindrazana, izay vonona hilatsaka an-tsitrapo no antsoina handrafitra an’io rafitra “Loharano” io. Anisany miantsoroka amin’ny fananganana izany ireo tompon’ andraiki-panjakana eny ifotony toy ny ben’ny tanàna sy ny lehiben’ny Distrika. Miantso ny rehetra hampiseho fifanohanana sy firaisan-kina hatrany ny Filoham-pirenena.
Rangahy manodidina ny 40 taona tratram-badiny nanolana zaza valo taona TOAMASINA (131) 28 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (99) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (98) 26 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (73) 28 mai 2020 Sarona ireo jiolahy roa nahafaty mpanampy an-trano FANAFIHANA TRANONA MPITANDRO FILAMINANA (63) 28 mai 2020 Nirefodrefotra ny basy teny Ampanefy, jiolahy 3 azo sambo-belona FANAFIHANA (56) 26 mai 2020